Lahatsary amin'ny vondrona: serivisy inona no tokony hofidinao?
Tia mifampiresaka ny olona, ​​​​fa ahoana raha mifanalavitra amin'ilay olona irinao ianao?Ny valim-panadinana avy amin'ny serivisy fifampiresahana video misy mpampiasa dimy dia hanampy anao hamorona klioba virtoaly anao manokana hiresahana amin'ny namana amin'ny Internet.Ny kalitao sy ny fahafahan'ny serivisy amin'ny chat video dia misy fiantraikany amin'ny anton-javatra maro, manomboka amin'ny bandwidth misy ka hatramin'ny kalitaon'ny webcam an'ny mpandray anjara.Desktop roa, solosaina finday Windows roa ary MacBook iray no nampiasaina hanaovana fitiliana.Ny ordinatera dia nifandray tamin'ny Network tamin'ny alàlan'ny Ethernet, ny solosaina finday dia nifandray tamin'ny Wireless.Ny fitsapana dia nandinika ny maha-mora ny fametrahana sy ny fampiasana serivisy manokana ary raha manana fiasa fanampiny izy ireo.
FametrahanaGoogle HangoutsRaha hampiasa Google Hangouts dia mila kaonty Google+ ianao.Mila mametraka plug-in navigateur mifanaraka amin'ny Windows XP sy ambony koa ianao, Mac OS X 10.5 sy ambony, na Linux.Ny chat video dia tafiditra ao amin'ny pejinao Google+.Eo ankavanana dia hahita ny bokotra Start Video Call ianao.Ny fanindriana azy dia hitondra anao voalohany any amin'ny pejy andrana iray izay hanaovan'i Google ny webcam sy ny mikrofoninao.Amin'izao dingana izao, tsy mbola misy namanao afaka mahita anao.
Mandritra ny fivoriana video dia afaka mijery horonan-tsary YouTube ianao
Ny pejin'ny fitsapana dia manana sakana izay ahafahanao misafidy "faribolana" (na vondron'ny namana) izay hampahafantarina momba ny chat video. Rehefa manomboka ny resaka vidéo, dia ho afaka hahita izany ny mpampiasa rehetra tafiditra ao anatin'ilay "faribolana" voafantina ary, raha tianao, dia miditra amin'ny resaka.Raha hanomboka hiresaka, tsindrio ny bokotra Ampidiro ary mandehana any amin'ny efitrano fivoriana video. Azonao atao ny manasa mpampiasa hafa handray anjara amin'ny resaka amin'ny fanoratana ny adiresiny Gmail ao amin'ny bara eo ankavia. Olona hatramin'ny 10 no afaka mandray anjara amin'ny fihaonambe video.
Video interface tsara sy kalitaoMandritra ny resaka, ny mpandahateny dia haseho amin'ny varavarankely lehibe, ary ny mpandray anjara hafa rehetra - ao amin'ny varavarankely kely etsy ambany. Ity endrika fampirantiana ity dia mandray ny fifandraisana sivilizasiona. Raha misy olona roa miresaka amin'ny fotoana mitovy amin'ny habe mitovy, ny Google Hangouts dia tsy hifidy afa-tsy ny iray amin'izy ireo, izay haseho eo afovoany. Na izany aza, raha tsy mety aminao ny safidin'ny Google dia azonao atao ny misafidy tsy miankina hoe iza amin'ireo mpandray anjara no haseho eo afovoan'ny varavarankely.Araka ny nasehon'ny andrana, rehefa manangana mpandray anjara mihoatra ny dimy ny fihaonambe video, dia mety hihena ny horonan-tsary, ary indraindray ny sary dia lasa ambany kalitao. Mivadika koa ny feo indraindray, saingy amin'ny ankapobeny dia avo lenta ny kalitaon'ny horonan-tsary sy ny feo.
Endri-javatra fanampiny Ankoatra ny fandefasana horonan-tsary, ny Google Hangouts dia manolotra endri-javatra maro hafa. Ny bokotra lehibe eo ambanin'ny varavarankely video dia ahafahanao mandefa hafatra an-tsoratra ho an'ny vondrona. Saingy ao amin'ny varavarankelin'ny chat video lehibe dia tsy aseho ny fampahalalana izay nandefasan'ny mpandray anjara hafatra an-tsoratra. Ny sisa amin'ireo mpampiasa, araka ny fahaizany, dia manindry ny bokotra "Chat" mba hamakiana ny taratasy.Ny endri-javatra manan-danja dia ny fahafahana manetsika YouTube amin'ny alàlan'ny bokotra eo amin'ny tsipika ambany. Izany dia ahafahanao mahita horonantsary izay haseho eo amin'ny efijery an-trano mandritra ny fihaonambe. Mandritra ny famerenana horonan-tsary, Hangouts dia hampangina ho azy ny mikrofoninao mba tsy halefa amin'ny horonan-tsary any ambadika ny feonao. Fa raha mbola mila miteny ianao, dia ho tonga hamonjy ny bokotra Push to Talk, izay hampihena ny haavon'ny horonan-tsary ary hampody ny mikrofoninao.
Ny tompon'ny Notebook Functionalitydia manoro hevitra ny hampiasa ity vahaolana ity ho an'ny fihaonambe video fohy, satria ny maharitra dia miteraka hafanana be loatra amin'ny solosaina finday. Google Hangouts, etsy ankilany, dia fitaovana tsara ho an'ny fifandraisana amin'ny horonan-tsarimihetsika kely, saingy raha hampiasa izany dia tsy maintsy manana kaonty Google ny tsirairay.
FametrahanaSkype PremiumRaha hanao fihaonambe video amin'ny vondrona Skype ianao dia mila kaonty Skype Premium miaraka amin'ny sara famandrihana $ 9 / volana (azo vidiana amin'ny $ 5 ny fidirana premium iray andro).Amin'ny alàlan'ny fananganana fihaonambe video, ny tompon'ny kaonty premium dia afaka manatevin-daharana ireo mpampiasa Skype hafa, na inona na inona kaonty ampiasainy - karama na maimaim-poana.Raha miala amin'ny resaka vondrona ny mpikarakara ny fihaonambe dia tapitra ho an'ny mpandray anjara rehetra ny fivoriana.
Ny dikan-teny Skype maimaim-poana sy karama dia mitaky fisoratana anarana miaraka amin'ny serivisy sy fametrahana fampiharana mpanjifa video amin'ny solosaina. Noho izany, tsy io no safidy tsara indrindra raha mila karakaraina haingana ny fihaonambe video. Rehefa tafiditra ao amin'ny kaontinao ianao dia afaka mikaroka namana amin'ny alàlan'ny Facebook, Gmail, Hotmail, na amin'ny anaram-bosotra Skype. Skype Premium dia ahafahanao mifandray amin'ny fihaonambe video hatramin'ny mpandray anjara 24. Mba hampavitrika ny resaka video dia tsy maintsy mampiasa ny kinova farany an'ny programa ianao.
Interface sy kalitaon'nyhoronan-tsary Amin'ny ankapobeny, ny kalitaon'ny horonan-tsarimihetsika sy feo nafindran'ny Skype dia mendrika ny fiderana ambony indrindra. Ny kalitaon'ny fandefasana horonan-tsary dia azo oharina amin'ny nasehon'ny Google Hangouts: tsara sy mazava ny ankamaroany, ary misy fahatarana kely. Indraindray dia mivaingana ny stream video ary mitombo ny olana rehefa mandroso ny fihaonambe video. Tsara kokoa noho ny Google ny kalitaon'ny feo. Ireo mpandray anjara vaovao dia naseho tamin'ny efijery kely kokoa, fa ny fipihana eo amin'ny efijery tiana dia mampitombo ny mpandray anjara iray.Ny kalitaon'ny webcam dia manan-danja kokoa ho an'ny Skype Premium noho ny Google Hangouts. Nampiasa webcam roa 720p HD mifandray amin'ny birao sy MacBook misy webcam iSight naorina ny fitsapana. Nahavariana ny fifanoherana amin'ny famahana ny Skype ho an'ny iSight sy ho an'ny webcam HD. Ny fampifandraisana ireo fakantsary telo mitovy amin'ny Google Hangouts dia tsy nitondra fiovana lehibe teo amin'ny kalitao, na dia hita mazava kokoa aza ny sary avy amin'ny iSight.
Endri-javatra fanampinySkype dia manana endri-javatra fanampiny mahasoa maro natsangana tao amin'ny serivisy video vondrona. Ireo mpandray anjara amin'ny fihaonambe video dia afaka mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny chat, izay haseho amin'ny varavarankely manokana eo ambanin'ny lahatsary. Rehefa manoratra hafatra an-tsoratra ny iray amin'ireo mpandray anjara dia hahita faribolana mena kely eo amin'ny kisary amin'ny chat ny mpandray anjara hafa, izay manambara fa misy hafatra vaovao tonga. Azo atao ihany koa ny mandefa hafatra amin'ny fihaonambe video amin'ny vondrona amin'ny alàlan'ny SMS, saingy mitaky fandoavam-bola fanampiny io fiasa io.Ankoatra izany, afaka mandefa rakitra (sary, MP3) amin'ny mpandray anjara hafa amin'ny fihaonambe amin'ny Skype ianao. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny varavarankely lehibe, izay tena mety, satria tsy mila manokatra navigateur na mpanjifa mailaka ianao handefasana rakitra amin'ny vondrona.
FampiasanaVideo conferencing ao amin'ny Skype Premium dia andoavam-bola ary mitaky rindrambaiko bebe kokoa hapetraka noho ny serivisy hafa.Tsy ny kalitaon'ny feo no tsara indrindra amin'ireo serivisy dimy nosedraina, ary ny kalitaon'ny horonan-tsary dia tsy tsara noho ny serivisy Google Hangouts maimaim-poana.
Tinychat diamametrakaTinychat, serivisy amin'ny chat video mifototra amin'ny navigateur.Amin'ity tranga ity, tsy mila mametraka na inona na inona ianao - mila mandamina ny efitranonao amin'ny chat ianao na miditra amin'ireo efa misy.Ny serivisy Tinychat dia maimaim-poana miaraka amin'ny doka sora-baventy.
Raha manapa-kevitra ny hanangana ny efitra firesahanao manokana ianao, Tinychat dia hitarika anao amin'ny zana-baravarankely maromaro hanampy anao hisafidy ny webcam sy ny mikrô, ary hanosika anao hisafidy na mikrô na Push to Talk. Amin'ity tranga farany ity, ny mikrô dia tsy ho mavitrika raha tsy rehefa voatana io bokotra io.Mora ny manasa ny hafa amin'ny resaka video. Mba hanaovana izany, ampiasao ny bokotra Share hita eo ambonin'ny varavarankelin'ny chat. Tinychat dia hamorona URL azo alefa amin'ny rehetra. Azonao atao ny miditra amin'ny vondrona Tinychat anao amin'ny alàlan'ny kaontinao Facebook, Twitter na tsy mitonona anarana ho vahiny. Ny vahiny vaovao dia afaka mahita ny resaka video, fa mba hanampiana ny horonan-tsarimihetsika manokana ao amin'ny efitranon'ny chat dia mila manindry ny bokotra Start Broadcasting izy ireo.
Video interface sy kalitaoAo amin'ny Tinychat, afaka mandamina fandefasana hatramin'ny 12 ianao, saingy tsy voafetra ny isan'ny mpijery.Tsara ny kalitaon'ny horonan-tsary ao amin'ny Tinychat, saingy ratsy ny kalitaon'ny feo.Tena tsy mahafinaritra ny tabataba mafy any aoriana.Mafy loatra ny feo ary somary mivadika raha oharina amin'ny Hangouts sy Skype.Misy fahatapahana amin'ny feo sy horonan-tsary mandritra ny segondra maromaro, ary koa ny fahatarana amin'ny fikorianan'ny horonan-tsary, aorian'izay dia ilaina ny famerenana ny navigateur.
Endri- javatra fanampiny Nyendri-javatra mahaliana indrindra amin'ny Tinychat dia ny EtherPad Lite (azonao atao ny manomboka izany amin'ny fipihana ny kisary misy taratasy eo ambanin'ny varavarankely video).Amin'ity sakana ity, ny mpandray anjara tsirairay amin'ny fihaonambe video dia afaka mandray an-tsoratra, izay manamora ny fiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasy.Ambonin'izany, haseho amin'ny loko mitokana ny naotin'ny mpandray anjara.
FunctionalityHo an'ny fifanakalozan-dresaka lava dia lavitra ny safidy tsara indrindra i Tinychat.Saingy mety ho vahaolana tsara izany raha mila manangona olona haingana ianao amin'ny fihaonambe video.Ary koa, ity serivisy ity dia mety amin'ny asa fiaraha-miasa amin'ny tetikasa izay mitaky fanoratana bebe kokoa noho ny firesahana.
Fametrahana AIMAVNy serivisy AV vaovao an'ny AIM dia maneho ny fahavononan'ny AOL hijanona hifaninana amin'ny indostrian'ny fihaonambe video.Namolavola fomba mora sy mora hifandraisana amin'ny vondrona kely misy mpampiasa hatramin'ny efatra ny orinasa.
Tsotra dia tsotra ny fanombohana resaka: hamafiso fotsiny fa 13 taona mahery ianao, ary ny AV dia hanome anao fidirana amin'ny chat. Aorian'izay, ny rafitra dia hamokatra URL izay mila ampitaina amin'ireo mpiara-miresaka ho avy. Ireo mpampiasa Mac tany am-boalohany dia mety ho voataona hametraka kinova Adobe Flash mifanaraka amin'ny Mac OS 10.6 na ambony. Ho an'ny ambiny, azo inoana fa efa napetraka izy io, ka tsy ilaina ny misintona sy mametraka rindrambaiko fanampiny. Ho fanampin'izany, tsy mila misoratra anarana amin'ny serivisy ianao ary manome ny mombamomba ny AIM.
Fifandraisana sy kalitaon'ny horonan-tsaryTamin'ny fanandramanay tamin'ny AV, ny horonan-tsary dia nanao ratsy lavitra noho ny tamin'ny serivisy hafa.Matetika no nivaingana ilay horonan-tsary, na dia tena tsara aza ny fampitana feo.Tsy nanome na inona na inona koa ny famerenana ny serivisy.Ankoatr'izay, taorian'ny namerenana ny efitrano fandraisam-bahiny dia nisy mpandray anjara telo hita, na dia roa monja aza no nandray anjara tamin'ny fanandramana.
Endri-javatra fanampinyIzy ireo dia somary maotina - resaka an-tsoratra sy ny fahafahana maka pikantsary amin'ny fihaonambe video.
Nykalitaon'ny asa AV dia tsy mety amin'ny dinidinika matihanina na fihaonambe raharaham-barotra. Na izany aza, ny AV dia mety ho vahaolana tsotra sy intuitive amin'ny fifandraisana amin'ny vondrona kely misy olona efatra, na ho an'ny fandaminana haingana antso an-tsary nefa tsy mametraka rindrambaiko fanampiny. Ohatra, manamora ny fifandraisana amin'ny havana na olom-pantatra izay tsy vesaran'ny fahalalana ara-teknika midadasika.
FametrahanaAnyMeetingNy serivisy maimaim-poana AnyMeeting dia ahafahanao mampifandray olona enina miaraka amin'ny chat video mavitrika.Mandritra izany fotoana izany, hatramin'ny 200 ny olona afaka mandray anjara amin'ny fihaonambe video ho mpijery.Raha vao manomboka mifampiresaka dia mpampiasa iray ihany no tsy maintsy misoratra anarana amin'ny serivisy (matetika ny mpandrindra ny chat).Raha hanasa mpandray anjara dia tsindrio fotsiny Start Webinar, ary rehefa avy manindry ny bokotra Start mic & cam hita eo amin'ny Toolbar ambany dia hanomboka ny fihaonambe video. \_
Amin'ny voalohany, AnyMeeting dia hampiseho varavarankely fanomanana.Rehefa avy nanome ny fijery farany ianao dia tsindrio ny bokotra vonona aho ary ho hitanao ao amin'ny efitrano fihaonambe video ianao.
Video Interface sy QualityAnyMeeting dia serivisy hafa tsy mandeha tsara amin'ny Mac taloha. Tahaka ny AV, mila Adobe Flash hapetraka amin'ny Mac OS 10.6 na ambony. Saingy mendrika ny labozia ny lalao: ny kalitao sy ny fahamarinan'ny fandefasana horonan-tsary dia tsy latsa-danja noho ny omen'ny Google Hangouts na Skype. Ny kalitaon'ny fifindran'ny horonan-tsary sy ny feo dia tena tsara, tsy misy "metallicity" be loatra sy fanodinkodinana.
Endri- javatra fanampinyAnyMeeting dia manan-karena amin'ny endri-javatra fanampiny. Azonao atao ny mampiseho efijery ho an'ny famelabelarana, mandefa fampahalalana momba ny fihaonambe, na mampiasa ny endri-javatra "fihaonana amin'ny telefaona" mba hahafahan'ireo izay tsy manana solosaina amin'izao fotoana izao manaraka ny fivoaran'ny hetsika. Hahita lisitry ny mpanatrika ny mpikarakara kaonferansa, ary afaka misafidy kisary iray ao amin'ny menio My mood mifanaraka amin'ny fihetsik'izy ireo ny mpanatrika. Ho fanampin'izay, azo vonoina na avela ho azo ny resaka an-tsoratra, horonan-tsary ary feo.
FunctionalityHo an'ny fifandraisana amin'ny namana na fianakaviana, ity serivisy ity dia be loatra amin'ny fiasa, saingy tsara ho an'ny fivoriana sy famelabelarana ara-barotra.Ary eto ny tombony lehibe indrindra dia ny mpikarakara ny fihaonambe ihany no tokony hisoratra anarana ao.Ny ambiny amin'ireo mpandray anjara dia miditra ao amin'ny efitranon'ny chat amin'ny fampidirana fotsiny ny adiresy mailaka nalefan'ny fanasana ho azy ireo.
Ny safidy tsara indrindraKa inona no serivisy tsara indrindra?Heverinay fa miankina amin'ny tanjonao ankehitriny ny safidiny.Google Hangouts sy Skype dia roa amin'ireo tolotra malaza sy manankarena indrindra.Izy ireo no tsara indrindra ho an'ny vondrona kely, izay samy manana kaonty Google na Skype.Maimaim-poana tanteraka ny Hangouts, fa raha zava-dehibe aminao ny kalitaon'ny feo, dia tokony ho tianao ny Skype.Tinychat na AV avy amin'ny AIM dia mety ho safidy tsara raha manana fotoana voafetra ianao ary mila resaka maika nefa tsy mametraka rindrambaiko aloha. Ny mpikambana dia afaka miditra amin'izany amin'ny alàlan'ny fipihana fotsiny ny URL nalefan'izy ireo, ankoatra izany, ireo serivisy roa ireo dia maimaim-poana tanteraka. Ny Tinychat dia mety kokoa ho an'ireo izay liana kokoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasy, fa tsy ny fifandraisana amin'ny feo. Ary ny serivisy AV dia tsara kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny havana sy namana, izay tsy mila misoratra anarana ao. Farany, AnyMeeting dia manolotra sehatra tsara ho an'ny fihaonambe raharaham-barotra lehibe, satria olona 200 no afaka mijery fampisehoana horonantsary miaraka. Ambonin'izany, ny mpikarakara ny fihaonambe ihany no tokony hisoratra anarana amin'ny mpanome tolotra. Ny endri-javatra fanampiny dia manatsara kokoa ny fahafahan'ny orinasa,fa ho tafahoatra loatra rehefa mifandray amin'ny namana na fianakaviana.
Inona no atao hoe chat video?
Koa satria zavamananaina ara-tsosialy ny olona iray, dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainany ny fifandraisana.Indraindray, na dia ny olona voatokana indrindra aza dia mila miresaka amin'olona.Ankoatra izany, raha tsy misy fifampiraharahana mahomby sy avo lenta, dia tsy azo atao ny mamaha ny olana momba ny asa sy ny orinasa.
Nandritra ny taonjato maro, ny olona dia nihaona tamin'ny namany sy ny olom-pantany mba hifandray, ary koa hamaha ny olana rehetra eo amin'ny fifandraisana.Saingy ny zava-misy ankehitriny dia toa sarotra ho antsika ny mahita fotoana hanaovana fotoana, hiseho eo ary hiresaka momba ny lohahevitra iray amin'ny mpiara-miasa izay mahaliana antsika.
Soa ihany fa taorian'ny nidiran'ny Internet amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fomba hentitra sy matotra, ny ankamaroan'ny fifandraisanay dia nifindra tany amin'ny zava-misy virtoaly.Mifandray amin'ny namana amin'ny tambajotra sosialy izahay, mandefa mailaka amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miasa.
Vao haingana no niseho ny mety hisian'ny fifandraisana vaovao amin'ny alàlan'ny Internet, izay azon'ny rehetra manana webcam ary mifandray amin'ny Internet haingam-pandeha mahazatra tsy misy fetran'ny fifamoivoizana.
Ny antso an-tserasera an-tserasera dia atolotry ny tranonkala maro amin'ny Internet amin'izao fotoana izao.Ny hany sisa tavela ho an'ny mpampiasa dia ny misafidy ny iray amin'izy ireo.Marihina, ohatra, ny serivisy amin'ny chat video an-tserasera http://pentavideo.ru.
Ny loharano dia manana interface tsara sy intuitive, ankoatra izany, dia maimaim-poana tanteraka, izay tena manan-danja ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa ..
Amin'ny chat video an-tserasera dia mamela anao tsy hanao fifanakalozan-dresaka amin'ny mpifanolo-bodirindrina fotsiny, fa koa hitarika resaka amin'ny olona marobe miaraka amin'ny fomba fihaonambe.Noho ny endri-javatra farany, orinasa maro no mampiasa chat video hanaovana fivoriana miaraka amin'ny biraony sy ny sampana lavitra azy.
Araka ny soso-kevitry ny anarana, ny chat video dia ny fahafahana mitarika resaka amin'ny endrika video.Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy vitan'ny hoe mandre ny mpifanandrina aminao ianao, fa mahita azy amin'ny alalan'ny fakantsary video ihany koa.
Ny fangatahana be dia be amin'ny resaka video an-tserasera amin'ny ankapobeny, ary ny serivisy http://pentavideo.ru indrindra indrindra, dia noho ny zava-misy fa ny fifandraisana amin'ny lahatsary an-tserasera dia manome fahafahana lehibe hanehoana fihetseham-po.Eny ary, indrindra fa ny fifandraisana mavitrika dia tsy handratra ny rantsan-tànanao, satria matetika no mitranga raha ao amin'ny fomba fifampiresahana ny resaka.
Saingy ny fifandraisana amin'ny horonan-tsary an-tserasera dia miha-malaza hatrany fa tsy ho an'ny namana, fa ho an'ny fifandraisana ara-barotra.Ankoatra izany, dia tena mety.Afaka mifehy mora foana ny asa ao amin’ny fandaminany, ohatra, ny mpitantana iray manao dia lavitra na manao vakansy.Eny, ary ny ambany, raha ilaina, dia manana fahafahana hifampidinika aminy momba ny olana lehibe.
Raha fintinina ny tombontsoa lehibe rehetra amin'ny fampiasana chat video, dia tokony ho marihina aloha ireto teboka manan-danja manaraka ireto:
- ny fahafahana mandray fanapahan-kevitra haingana;
- fitomboana lehibe eo amin'ny famokarana asa;
- ny fahafahana mahazo fanampiana manam-pahaizana;
- fitahirizana loharanon-karena;
Raha mbola tsy voatery nampiasa ny endrika fifandraisana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fakan-tsary video ianao taloha, dia manoro hevitra mafy izahay mba hanandrana.Azo antoka fa tsy ho diso fanantenana ianao.
Vesti.net: Microsoft Teams video chat dia hametraka mpandray anjara amin'ny habaka virtoaly iray
Microsoft dia nanambara fanavaozana lehibe ho an'ny serivisy fihaonambe video Teams.Ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe dia ny fampidirana ny Together Mode - novolavolaina hatrany am-piandohan'ny valan'aretina coronavirus indrindra ho an'ireo izay miasa sy mianatra lavitra.
Ny fomba dia miteraka fahatsapana fa ao amin'ny efitrano nomerika iray ihany ny mpandray anjara rehetra.Ny teknolojia fizarana mifototra amin'ny AI dia mamindra ny avatar'ny mpandray anjara amin'ny sehatra ankapobeny.Mety ho toy ny efitrano fianarana, ohatra, izy io, izay ahafahan'ny olona 49 mivory miaraka.Ho an'ny latabatra boribory sy atrikasa dia misy fiaviana hafa koa omena.
Ny Together Mode dia ao amin'ny beta amin'izao fotoana izao ary mampanantena ny hamoaka izany amin'ny mpampiasa Teams rehetra ny orinasa amin'ny volana Aogositra.Ny sivana ho an'ny horonan-tsary dia ho hita ao amin'ny Teams ihany koa.Ao amin'ny efitrano fijerena maso, ny mpampiasa dia afaka misafidy sivana hanitsiana ny haavon'ny jiro sy hanalefaka ny fifantohan'ny fakantsary alohan'ny hidirana amin'ny fivoriana.Azonao atao, ohatra, ny misafidy ny hanakorontana ny lamosina ao ambadiky ny lamosinao.
Fanavaozana iray hafa dia ny Dynamic View.Araka ny nolazain'i Microsoft dia nanjary azo natao ny mampiseho fitaovana ho an'ny fiaraha-miasa sy ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana amin'ny efijery mitovy.Nohavaozina ihany koa ny fidirana amin'ny hafatra amin'ny chat.Ireo hafatra rehetra nalefa nandritra ny fivorian'ny Microsoft Teams ireo dia hiseho amin'ny efijerin'ny tsirairay nefa tsy mila manokatra manokana ny tontolon'ny chat.
Ary zava-baovao iray hafa - dikanteny misy dikanteny.Ny mpandray anjara dia afaka miditra amin'ny serivisy izay mandika kabary avy amin'ny fiteny hafa amin'ny fotoana tena izy.Ary noho izany, ny fihaonambe dia ahafahan'ny olona tsy mitovy fiteny hifampiresaka.Amin'ny faran'ity taona ity, mampanantena i Microsoft fa hampiditra transcript an-tsoratra ny fivoriana, izay ahafahanao mirakitra an-tsoratra izay voalaza.Aorian'ny fivoriana dia ho voatahiry ho azy ao amin'ny tabilaon'ny chat ho an'io fivoriana io ny rakitra transcript feno.
Nilaza i Microsoft fa tsy ho ela ny Teams dia afaka hanohana mpanatrika fivoriana hatramin'ny 1,000, ary olona hatramin'ny 20,000 rehefa mijery famelabelarana na fifanakalozan-kevitra.Ho an'ny fampiharana finday, mampanantena ny orinasa fa hitondra fanohanana ho an'ny mpanampy nomerika Cortana.Hanampy anao hanao antso tsy misy ifandraisany amin'ny olona iray manokana izany, hampifandray ny mpampiasa amin'ny fivoriana voalahatra, handidy hafatra ary handefa azy ireo, ary koa ny rakitra ilaina amin'ny chat conference.
Vaovao ao Jivo: resaka video, antontan'isa kaonty ary mpamatsy vaovao ho an'ny chatbots
Nanomana fanavaozana mahasoa maro izahay izay hanamora ny fiaraha-miasa amin'ny Jivo sy hanampy amin'ny fampitomboana ny varotra.
Miaraha miasa amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny chat video
Miaraka amin'ny VideoForce, dia nanomana vahaolana ahafahanao misongadina amin'ny fifaninanana ianao - afaka miara-miasa amin'ny mpanjifan'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tsary ianao, toy ny mitranga mivantana.
Ampiasao ny kaody promoVF2022hatramin'ny 03/01/2022 ary mahazo fidirana maimaim-poana 30 andro amin'ny andiana VideoForce feno.
Fakafakao ny antontan'isa ao amin'ny fizarana "State kaonty".
Ao amin'ny fizarana "State kaonty" izao dia azonao atao ny manangona sy mampitaha ny angona mandritra ny fotoana rehetra.Eto ianao dia afaka mahita fampahalalana momba ny fifanakalozan-kevitra sy ny antso miaraka amin'ny sivana voarindra.
Diniho ny antontan'isa ary manapaha hevitra ny fomba hanatsarana ireo tondro ireo.
Ampifandraiso amin'ny mpanome vaovao ny chatbots
Manohy manitatra ny lisitry ny mpiara-miombon'antoka izay ahafahanao mamorona chatbot anao manokana.Tamin'ity indray mitoraka ity dia nametraka ny fidirana amin'ny serivisy Dahi.ai sy Metabot izahay.
Ny chatbot dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny entana fanohanana ary hampitombo ny varotra.Miaraka amin'ny fanampian'ny serivisy Dahi.ai sy Metabot, azonao atao ny manitsy ny bot, manampy ny anao manokana na mampiasa script efa vita, ary mampifandray izany amin'ny Jivo.
Tombontsoa amin'ny Metabot- Mpanamboatra mifototra amin'ny fanoratana sy ny fanekena ny kabary (NLU miaraka amin'ny Dialogflow)
- angon-drakitra namboarina ho fanangonana antontan-taratasy sy fanadihadiana
- Fananana mpanjifa mandroso, fametahana automatique ary fanendrena parameter
- Fanetehana amin'ny fanemorana ny script sy ny famoronana autofunnels
- Fitaovana fampidirana amin'ny API ivelany
- Fivarotana naorina ao anaty bot
- Fiteny fanoratana ao anatiny
- Fametrahana amin'ny rahona na amin'ny mpizara
Vidiny: maimaim-poana (hatramin'ny mpampiasa 100 isam-bolana), manomboka amin'ny 1000 roubles isam-bolana ho an'ny mpampiasa vaovao tsirairay
Tombontsoa Dahi- Ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany
- Interface amin'ny teny anglisy sy tiorka.Ny Rosiana dia tohanana amin'ny fifanakalozan-dresaka bot.
Gazety Vedomosti - alao amin'ny mailaka ny vaovao momba ny raharaham-barotra
Fanapahan-kevitry ny Sampan-draharaha Federaly misahana ny Fanaraha-maso ny Fifandraisana, ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao ary ny Media Mass (Roskomnadzor) tamin'ny 27 Novambra 2022 EL No. FS 77-79546
Mpanorina: JSC "Business News Media"
Ary momba.Tonian-dahatsoratra: Kazmina Irina Sergeevna
Fanampin'ny dokambarotra sy fampahalalana ny gazety Vedomosti.Nosoratan'ny Sampan-draharaha Federaly misahana ny Fanaraha-maso ny Serasera, ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao ary ny Media Mass (Roskomnadzor) amin'ny laharana PI No. FS 77 - 77720 tamin'ny 17 Janoary 2022.
Ny fampiasana fitaovana rehetra dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fitsipiky ny fanontana indray ary eo anatrehan'ny rohy mankany amin'ny vedomosti.ru
Ny vaovao, analyse, vinavina ary fitaovana hafa aseho ato amin'ity tranokala ity dia tsy tolotra na tolo-kevitra hividianana na hivarotra fananana.
Ny tranokala dia mampiasa adiresy IP, cookies ary data geolocation an'ny mpampiasa Site, ny fepetra fampiasana dia voarakitra ao amin'ny Politika momba ny fiainana manokana
Zo rehetra voatokana © Business News Media JSC, 1999—2022
Banky Aziatika-Pasifika dia manasa amin'ny resaka video "Ny fiantraikan'ny valan'aretina amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsenan'ny fifanakalozana vahiny" ao amin'ny Telegram tamin'ny 17 Desambra tamin'ny 12:00
Tao anatin'ny roa taona izay, nisy fiovana maneran-tany teo amin'ny tsenam-bola.Mbola misy fiantraikany amin'ny politika sy ny toekarena manerantany ny areti-mifindra.Ahoana no fihetsiky ny vondrom-piarahamonina ara-bola manoloana ny krizy coronavirus?Inona avy ireo safidy ho an'ny fampandrosoana ny hetsika?Inona no miandry ny vola iraisam-pirenena?
Amin'ny 17 Desambra, amin'ny 12:00 ora Moskoa, ny fantsona Telegram an'ny Banky Azia-Pasifika t.me/atb_su dia hampiantrano webinar amin'ny resaka video momba ny lohahevitra "Ny fiantraikan'ny valan'aretina amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsenan'ny fifanakalozana vahiny."
Vladimir Burdenko, Lehiben'ny Tahirim-bolan'ny Banky Fampiasam-bola ao amin'ny Banky Azia-Pasifika, dia hiresaka momba ny fitondran-tenan'ny toekarena eran-tany nandritra ny areti-mifindra COVID-19, momba ny fihetsiky ny manampahefana ara-bola amin'ny filàna fampifanarahana amin'ny toe-javatra vaovao sy ny zavatra hitranga. fiovana eo amin'ny tsenam-bola atsy ho atsy...
Lahatsoratra Rosiana, maimaim-poana
Miaraka amin'ny karazan'olona rehetra.Ny fampielezam-peo an-tserasera dia namboarina amin'ny fomba mora sy mahafinaritra ny manao izany.Mifandray ianao ary tonga dia tonga any amin'ny interlocutor.Raha tianao izany - mifankahalala ianao, raha tsy tianao - manindry ny bokotra ianao dia manana endrika vaovao eo anoloanao.
Resadresaka am-pifaliana, filalaovana fitia tsy mifamatotra, fifanakalozan-dresaka momba ny sarimihetsika vaovao sy ny fironana lamaody, ary indraindray resadresaka maharitra amin'ny mamatonalina "ho an'ny fiainana".Amin'ny ankapobeny, na inona na inona toe-po anananao anio, dia ho azonao tokoa ny onjanao eto.
Mpinamana isika :)
Eny, mitranga amintsika izany.Ary matetika.Hitanao fa ny fifandraisana amin'ny Internet dia marina kokoa noho ny tena fiainana.Eto ianao dia afaka ny tenanao fa tsy mampifanaraka amin'iza na iza.Midika izany fa mora kokoa ny manavaka olona akaiky anao ara-panahy.
Iza no miaraka aminay?
Azonao atao ny manamboatra ny fikarohanao amin'ny loko volo, ny haben'ny tratra ary ny fahaiza-manao borscht.Tsara, tsara.Nivazivazy izahay) Fa tena mahafinaritra ny ankizivavy.Tadiavo ny tenanao fa resaka VIDEO ity.
Misy samihafa.Brunettes, blondes, mena.Mpanao fanatanjahantena, mpitendry mozika, stylist.Mpisolovava, programmer, miaramila.Mpandraharaha, mpitantana ary mpiasa.Miala tsiny fa tsy misy andriana mitaingina soavaly fotsy.Fa mitady izahay :)
Raha ny tena marina dia miseho indraindray ity karazana sary ity!Mitendry gitara, mihira hira ary manao beatbox izy ireo.Aza saro-kenatra koa.Asehoy izao tontolo izao ny talentanao.Iza no mahalala fa mety mihantona eto koa ny mpamokatra)
Eto izahay dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana ary mikarakara "antoko lohahevitra" ary miompana amin'ny ekipa baolina kitra ankafiziny mihitsy aza.Avia ho namanay!Rehefa dinihina tokoa, ny fialam-boly dia mahafinaritra kokoa ao amin'ny orinasa lehibe.
Te hihaona aminao izy ireo!Manorata ho azy ireo haingana araka izay azo atao!
Noforoninay ity resaka video ity mba hahafahan'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mihaona sy mifaly.Ny laharam-pahamehanay dia ny fifanajana ny mpandray anjara rehetra amin'ny chat.Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fitenenan-dratsy, ny fitenenan-dratsy, ny fanevatevana ary ny fanalam-baraka ny maha-olombelona.Izany rehetra izany dia voalaza ao amin'ny fitsipiky ny fampiasana ny loharanontsika.Azafady vakio tsara izy ireo alohan'ny hanombohanao ny fampitana voalohany anao.
F: Ho an'ny sokajin-taona rehetra ihany ve ity resaka video ity?
A : Tsy ny olon-dehibe ihany no mifampiresaka eto fa ny ankizy dia voarara mafy tsy hiditra amin’ny resaka.
F: Fifandraisana feno fanajana ihany!
A: Azafady mba mahaiza mahonon-tena sy mandinika amin'ny resaka video!Ary hiaraka aminao koa izy ireo!
F: Moa ve isika ho an'ny fifandraisana matotra sy mahafinaritra?
A: Tsy ekena ny tsy mahalala fomba sy mandamina ny raharaha eto.Ankoatra izany, mampiasa teny maloto.Voarara ny fiteny vetaveta.Manaja ny tenanao sy ny hafa.
F: Extremista, mpampihorohoro ary fanatika mpitolona hafa - mamakivaky ala !?
A: Mifandray amin'ny olona samy hafa firenena, firazanana ary antokom-pinoana izahay.Ary ny mahagaga dia mahita fiteny iraisana izy ireo.Noho izany, raha misy mahasosotra anao, dia miverena amin'ny olona iray hafa.
F: Voarara tanteraka ny mandefa ny sarin'ny olon-kafa, ny horonan-tsary ary ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny chat?
A: Tsy azonao atao ny mandefa fampahalalana tsiambaratelon'ny antoko fahatelo amin'ny besinimaro.Esorina io famerana io raha tsy mahita karazana heloka bevava ianao.
F: Tsy toerana hanaovana dokambarotra ve ny resaka video?
A: Manolora ny entanao sy ny serivisinao amin'ny loharano voatokana.Raha ny marina, voarara ihany koa ny manao dokam-barotra amin'ny tranokala hafa.
Ao amin'ny chat video dia afaka mifandray tsy misy fisoratana anarana ianao, saingy tsy midika izany fa tsy ho afaka hanara-maso ny mpanao heloka bevava sy ny mpandika lalàna.Ao amin'ny tranokala dia manan-jo handrakitra ho azy ny fampielezam-peo rehetra an'ny mpampiasa izahay, noho izany, raha ilaina, dia tsy ho sarotra ny hahita sy hanasazy ilay meloka.Mbola manana fanontaniana?Manana soso-kevitra hanatsarana ny asan'ny chat video ve ianao?Ny fifandraisana amin'ny fifandraisana amin'ny mpitantana dia eto ambany.
Ahoana ny fomba hamoronana chat video vondrona amin'ny WhatsApp
Ny fanavaozana farany amin'ny WhatsApp dia mitondra endri-javatra efa nandrasana hatry ny ela: ny fahafahana mamorona vondrona audio sy video chat.Ahoana ny fomba hanombohana fihaonambe video amin'ny WhatsApp na hiantso olona maromaro indray mandeha, holazainay aminao ao amin'ny lahatsoratray.
Ahoana ny fiasan'ny vondrona WhatsApp
Na dia tsy azon'ny mpampiasa rehetra aza ity fiasa ity - misokatra tsikelikely ho an'ny faritra samihafa.Ireo izay nametraka ny kinova WhatsApp ankehitriny ihany no afaka manao antso an-tariby.
Mandritra ny antso an-peo amin'ny dikan-teny vaovao amin'ny fampiharana, azonao atao ny manasa olona iray ho any amin'ny orinasa amin'ny mpiara-miasa aminao.Izany hoe, hisy olona telo ao amin'ny chat audio.
Ny antso an-tsary dia azo atao eo anelanelan'ny fifandraisana efatra, ka afaka manampy olona roa hafa amin'ny chat ianao.
Raha mila manambatra olona mihoatra ny efatra ianao amin'ny fihaonambe iray dia ampiasao programa hafa.Niresaka tamin'ny antsipiriany momba ny serivisy maimaim-poana amin'ny resaka video izahay tao amin'ny lahatsoratra iray.
Inona no atao hoe video chat
Ny fifandraisana dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay.Saingy amin'izao fotoana izao, noho ny fivoaran'ny teknolojia, dia azo atao ny miresaka amin'ny interlocutor momba ny lohahevitra mahaliana anao amin'ny Internet.Ny chat video, izay miha-malaza haingana, dia hanampy amin'ny fanatanterahana izany.
F'inona izy ireo?Ity dia resaka vidéo izay manohana ny famerenan'ny fampahafantarana horonan-tsary sy feo amin'ny fifandraisana Internet.Ny mampiavaka azy dia ny hoe mihoatra ny roa ny mpifampiresaka afaka mifandray ao.Mba hanombohana resaka video dia mila manana solosaina misy fifandraisana Internet ianao, mpilalao tselatra miasa, webcam, mikrô ary écouteur.
Ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny chat video dia saika tsy latsa-danja amin'ny resaka eo amin'ny fiainana mahazatra, satria ny rivotry ny zava-misy dia tohanan'ny fifandraisana hita maso. Ny chat roulette dia tena ilaina amin'ny tanora, izay ahafahanao miala voly sy mahita namana vaovao avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny rafitry ny tranokala dia natao tamin'ny fomba izay alohan'ny hanombohanao hifidy interlocutor dia azonao atao ny miditra amin'ny mari-pamantarana tianao, ohatra, taona na firenena onenana. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny Internet dia ny mahatonga ny fihetseham-po tsy mahazatra sy ny adrenalinina ao amin'ny olona iray, izay mahatonga azy io ho mora kokoa, na dia ho an'ireo olona izay manana olana amin'ny saro-kenatra amin'ny tena fiainana aza. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny chat video dia vonona ny hanolotra fifandraisana mora amin'ny rehetra, izay mety ho tapaka amin'ny fotoana rehetra raha tsy mifanaraka aminao ny fandehan'ny resaka.
Raha mino ny antontan'isa ianao, dia mpivady maro izay olom-pirenena avy amin'ny firenena samihafa no niforona noho ny fifandraisana amin'ny chat video.Noho izany, raha toa ianao ka tsy afaka mahita vady ao amin'ny tontolo manodidina anao nandritra ny fotoana ela, na tsy ampy ny fifantohan'ny lahy sy ny vavy, mandehana fotsiny amin'ny chat roulette.Eto ianao dia hahita mpifanolo-bodirindrina iray izay ahafahanao manao resaka mahafinaritra ary amin'ny ho avy dia handamina fivoriana amin'ny tena fiainana.
Aza adino koa fa ny chat video dia vahaolana tsara ho an'ny olona te hianatra teny vahiny.Rehefa dinihina tokoa, na dia miditra ao amin'ny fototra teorika isan'andro, dia tsy ho afaka hahatratra ny vokatra irina raha tsy misy fampiharana.Ny chat video dia loharano mampifandray olona an-tapitrisany avy amin'ny firenena samihafa.Noho izany, dia afaka manambatra ny fifandraisana mahafinaritra amin`ny fampiharana ny fiteny ilaina.
Ny Microsoft Teams dia hahazo encryption end-to-end amin'ny volana Jolay
Tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity, nampanantena i Microsoft fa hanome ny sehatra Microsoft Teams amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny encryption end-to-end tsy ho ela.Vao haingana no nanambara ny orinasa fa hanomboka amin'ny voalohandohan'ny volana Jolay ny famoahana ny endri-javatra.Haharitra tapa-bolana eo ho eo vao hampiditra azy tanteraka.
Ny encryption amin'ny faran'ny farany dia ny fanafenana ny vaovao amin'ny loharanony sy ny decryption ho an'ny tanjona nokasainy tsy misy ny mety ho decryption amin'ny alalan'ny nodes mpanelanelana.Ny Microsoft Teams dia hampiasa encryption end-to-end (E2EE) ho an'ny antso VoIP ad hoc 2-antoko, ahafahan'ny mpampiasa mamindra fampahalalana saro-pady kokoa toy ny tenimiafina.
Araka ny vavahadin-tseraseraMSPoweruser, ity endri-javatra ity dia azon'ny administratera atao ho an'ny mpampiasa manokana sy ny fikambanana manontolo.Ny mpampiasa dia afaka mamela ny encryption end-to-end amin'ny alàlan'ny safidy End-to-End Call Encryption eo ambanin'ny Settings -> Privacy.Tsy ho hita intsony ny fandraketana antso sy ny fandikana.Ny antso E2EE dia tsy hanohana afa-tsy ireo endri-javatra fototra toy ny feo, horonan-tsary, fizarana efijery, chat, ary ireo endri-javatra mandroso dia tsy ho hita.
Ny encryption dia tsy hiasa raha toa ka samy nahafahan'ny mpiantso sy ny mpandray ny antso ny E2EE tao amin'ny firafiny.Ny fanafenana farany mankany amin'ny farany dia tsy ho hita afa-tsy amin'ny desktop sy mpanjifa finday, fa tsy amin'ny dikan-tranonkala Teams.
Snapchat voampanga ho lozam-piarakodia nahafaty olona
Taorian'ny telo taona nanandrana nitory ilay iraka malaza Snapchat, ny ray aman-drenin'ireo zatovo maty tamin'ny lozam-piarakodia dia manana fahafahana hitondra ny serivisy tsy azo kitihana ho any amin'ny fitsarana.Toa vaky ilay "Fizarana faha-230" malaza sy tsy mihozongozona ao amin'ny Fehezandalàna mifehy ny Lalàna Amerikana, izay manaisotra ny tompon'ny loharanon-karena Aterineto ho tompon'andraikitra amin'izay apetraky ny mpampiasa azy.
Ampahatsiahivinay, tamin'ny May 2022 tao amin'ny Fivondronan'i Walworth, Wisconsin, tanora telo no maty tamin'ny lozam-piarakodia, naka sary tao amin'ny Snapchat. Araka ny filazan'ny ray aman-drenin'ny iray amin'ireo niharam-boina, nanafaingana ny 123 mph ny mpamily mba haka ny hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny fampiasana Snapchat ary hizara ny zava-bita mampiahiahy amin'ny mpanjifa. Mino izy ireo fa tsy hanao zavatra hadalana toy izany ny zatovo raha tsy noho ny fihetsiky ny tolotra Internet.
Ny zava-misy dia ny Snapchat dia ahafahanao mampiasa sivana isan-karazany amin'ny Internet, ao anatin'izany, eo amin'ireo fiasa malaza, misy ny fahafahana mitifitra horonantsary miaraka amin'ny "sivana haingana". Mba hanaovana izany, ny programa dia manara-maso ny toeran'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny sensor GPS ary mampiseho ny sandan'ny hafainganam-pandeha amin'ny horonan-tsary. Ny ray aman-dreny dia mino fa ny serivisy video dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny zava-nitranga noho ny famoahana fitaovana toy izany, izay midika fa mandrisika ny mpampiasa hanao zavatra mamoy fo ao anatin'ny tsy fahatongavana.
Tsy nahomby ny andrana voalohany hitondrana solontena Snapchat eny amin'ny fitsarana farafaharatsiny. Hita fa ireo karazana orinasa teknolojia ireo dia voaro amin'ny "Fizarana 230" ary afa-po tanteraka amin'ny andraikitry ny mpampiasa ao anatin'ny serivisy. Tsy maninona na mamoaka fitaovana tsy mendrika na mampiasa ny serivisy ho an'ny fialamboly amin'ny toe-javatra mampidi-doza - toy ny amin'ity tranga ity. Nolavin’ny Fitsarana Avo Amerikanina ho an’ny boriborintany fahasivy àry ilay fangatahana ary nolaviny tsy nisy fitsarana.
Taorian'ny taona maro nisian'ny fikasana tsy misy dikany handosirana ilay "Fizarana 230" malaza ratsy, dia nanandrana niala tamin'ny ilany ireo mpitory - raha toa ka inoana fa ny Snapchat dia mampirisika ny mpampiasa hanao hetsika mampidi-doza sy tsy azo ekena, dia azo atao ny mitsara ny raharaha. . Ny serivisy dia mety tsy tompon'andraikitra amin'ny fihetsiky ny mpampiasa, fa hisy ny sazy ho an'ny antony manosika hanao hetsika.
Mazava ho azy fa tonga amin’ny hadalana ny zava-misy – efa nisy hatramin’ny taona 1996 ny lalàna, noho izany, tsy azo heverina ho marina tanteraka amin’izao fotoana izao, raha lazaina amin’ny fomba malefaka.Etsy andanin’izany, mbola mijanona ny fahataran’ny birao, ary tsy afaka manao na inona na inona mivantana ny fitsarana amin’ny raharaha tahaka izao.Ity toe-javatra ity dia efa niteraka resonance lehibe teo amin'ny fiaraha-monina, ary nanjary liana tamin'ilay raharaha sarotra ny Fitsarana Tampony Amerikana Clarence Thomas - midika izany fa misy ny fahafahana rehetra manolotra an'i Snapchat amin'ny fiantsoana ary na dia ny fandresena ny raharaha ho an'ireo naratra aza. fety.Fanampin'izany, ny fandresena amin'ny tranga iray dia mety hanokatra ny fahatsinjovana ho amin'ny fitsarana ireo fikambanana hafa izay niala tamin'ny andraikiny ihany koa teo aloha ary manohy miasa mifanohitra amin'ny lalàna momba ny fitondran-tena.
Ny Microsoft Teams dia hahazo encryption end-to-end sy fanatsarana ny fahaiza-manao fampisehoana
Manohy manatsara ny sehatra Microsoft Teams ny Microsoft ary hampiditra endri-javatra vaovao maromaro ho azy tsy ho ela.Voalohany, hiseho amin'ny sehatra farany ny encryption amin'ny farany, ary faharoa, ny orinasa dia hampiovaova ny toe-javatra sy ny fahafahan'ny fihaonambe video.
Ny dikan-beta amin'ny endri-javatra fanafenana farany amin'ny Microsoft Teams dia hiseho amin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity ho an'ireo mpampiasa ara-barotra amin'ny sehatra.Azo alaina amin'ny antso tsy voalamina miaraka amin'ny mpandray anjara roa.Amin'ny ho avy, kasaina ny hampiditra encryption amin'ny farany ho an'ny fihaonambe video nomanina miaraka amin'ny mpandray anjara marobe.
Ny Microsoft Teams amin'izao fotoana izao dia tsy manohana ny fanafenana farany amin'ny antso an-tsary. Ny angon-drakitra dia voarakotra amin'ny fitaterana sy amin'ny fitahirizana, izay mety hamela ny serivisy nahazo alalana hidirana azy amin'ny alàlan'ny famongorana azy. Ny orinasa dia mampiasa SharePoint encryption mba hiarovana ny angona voatahiry, ary OneNote encryption dia ampiasaina amin'ny naoty voatahiry ao amin'ny Microsoft Teams. Ny atiny amin'ny chat rehetra dia voarakotra ihany koa mandritra ny fandefasana sy fitahirizana. Ny mpifaninana lehibe indrindra amin'ny Microsoft Teams, Slack, dia tsy manana encryption end-to-end ihany koa. Ary ny serivisy Zoom dia nanomboka nampiditra ny teknolojia tamin'ny Oktobra tamin'ny taon-dasa.
Mody famelabelarana vaovao telo ihany koa no hiseho ao amin'ny sehatry ny fihaonambe video Microsoft Teams.Ny fomba mpanao tatitra dia ahafahan'ny votoaty nomerika hamboarina eo akaikin'ny tarehin'ny mpandahateny ho famantarana hita maso ho an'ny mpandinika.Fomba iray mitovy amin'izany no ampiasaina amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fahitalavitra.
Ny maody mijoro dia ahafahanao mametraka ny tavanao eo ambonin'ny atiny aseho, izay hita manerana ny faritry ny efijery manontolo.Ny fomba fahatelo mifanila dia mametraka ny tarehin'ny mpandahateny eo akaikin'ny votoaty aseho.Ho avy amin'ny Microsoft Teams ny maody standout amin'ity volana ity, miaraka amin'ireo maody roa hafa ho avy aoriana.
Microsoft dia namoaka ny PowerPoint Live plugin for Teams androany.Hanamora ny famelabelarana PowerPoint ho an'ny mpanolotra sy mpandray anjara hafa amin'ny fihaonambe izany.
Ireo mpanolotra dia afaka mahita ny chat, naoty ary ny slides amin'ny varavarankely iray, ary ny mpandray anjara amin'ny fivoriana hafa dia afaka mijery tsy miankina ireo dia aseho.
Ny tompon'ny Tinder dia nividy ny mpamorona serivisy horonantsary Koreana Hyperconnect amin'ny $ 1.7 lavitrisa
Ny Match Group, izay tompon'ny Tinder, dia nanambara ny fividianana ny orinasan-tsarimihetsika Koreana Hyperconnect.Nahatratra 1,7 miliara dolara ny fifanarahana.Ity no fahazoana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Match Group.
Ny mpamorona Koreana dia manana fampiharana roa lehibe: Azar dia natao ho an'ny fifampiresahana amin'ny feo sy horonan-tsary, ary ny Hakuna Live dia ho an'ny streaming an-tserasera.Mahazo tombony ny orinasa Koreana, ka mahatratra 200 tapitrisa dolara ny vola miditra amin'ny taona 2022, hoy ny Match Group.Izany dia 50% mihoatra noho ny herintaona.Ny serivisy dia malaza indrindra amin'ny tsena Aziatika, noho izany, ny 75% amin'ny fidiram-bola dia avy amin'ny mponina aziatika.
Hyperconnect koa dia malaza amin'ny famolavolana zava-baovao.Ny orinasa dia namorona ilay antsoiny hoe "version mobile voalohany" an'ny WebRTC.Izy io dia natao ho an'ny fifandraisana mivantana amin'ireo mpampiasa finday nefa tsy mampiasa lohamilina.Manatsara ny fiarovana ny mpampiasa izany ary mampihena ny haavon'ny developer.
Ny teknolojia iray hafa an'ny orinasa Koreana dia manamora ny fifandraisan'ny solontenan'ny vondrona amin'ny fiteny samihafa.Izy io dia ahafahan'ny olona mifampiresaka sy mifanakalo hevitra amin'ny fampiasana fandikan-teny amin'ny fotoana tena izy.Ity endri-javatra ity dia ampiasaina amin'ny serivisy Azar.
Inona no antony nahazoan'ny Match Group ny Hyperconnect tsy voafaritra.Ireo mpanao gazety Techcrunch dia manombatombana fa ny orinasa dia mety hampiditra ny teknolojia ao amin'ny Tinder sy ny serivisy mampiaraka hafa amin'ny ho avy.Andrasana amin’ny telovolana faharoa amin’ny 2022 ny fanakatonana ny fifanarahana.
Voaheloka noho ny fanodikodinana antontan'isa momba ny mpampiasa mavitrika i Zoom
Ny serivisy antso an-dahatsary Zoom dia tsy manana mpampiasa mavitrika 300 tapitrisa isan'andro izay nambaran'ny orinasa teo aloha.Niaiky io zava-misy io ilay mpanome tolotra rehefa nisarika ny saina tamin'ny fanambarana ofisialy navoaka teo aloha ny vavahadin-tserasera Verge.
Ny fanambarana tany am-boalohany nataon'i Zoom dia nilaza... "mpampiasa mihoatra ny 300 tapitrisa isan'andro."ary."Olona maherin'ny 300 tapitrisa eran'izao tontolo izao no mampiasa Zoom amin'izao fotoan-tsarotra izao" ...Iray andro taty aoriana, nisy fanitsiana ny hafatra.Izao dia mivaky hoe"300 Million Zoom Video Conferencing Mpikambana. "
Araka ny nasehon'ny The Verge dia misy fahasamihafana goavana eo amin'ny resaka mpampiasa mavitrika isan'andro sy mpandray anjara amin'ny chat video.Amin'ny tranga faharoa, ny olona iray ihany dia azo isaina im-betsaka: raha nandamina fivoriana fifandraisana video dimy nandritra ny andro ianao, dia isaina ho mpampiasa dimy ianao."Isan'andro Mpampiasa mavitrika" dia isaina indray mandeha isan'andro.Ao amin'io famantarana io no matetika kajy ny lazan'ny serivisy manokana.Raha tsy izany dia ho lehibe kokoa noho ny tena izy ny mpihaino amin'ny sehatra.
Nanova ny hafatra mamitaka i Zoom tamin'ny 24 aprily, andro iray monja taorian'ny famoahana, izay mazava ho azy fa nahavita niparitaka tamin'ny lohateny rehetra tamin'ny famoahana an-tserasera.Taorian'ny nanatonan'ny The Verge an'i Zoom dia niaiky avy hatrany ny fahadisoana ny orinasa.
“Faly izahay manampy ireo mpanatrika antso an-tsary 300 tapitrisa isan'andro hifandray hatrany mandritra ny areti-mifindra.Tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginay tamin'ny 22 Aprily, niantso tsy nahy ireo mpikambana ho "mpampiasa".Rehefa nahatsapa ny fahadisoana izahay, dia nanova ny hafatra ho "mpikambana".Fanaraha-maso lehibe ho anay izany, ”hoyi Zoom namaly ny antson'ny The Verge.
Ny famoahana an-tserasera dia nanamarika fa na dia mbola tsy nanome angon-drakitra momba ny isan'ny mpampiasa isan'andro aza ny orinasa dia tena mahavariana tokoa ny fitomboan'ny mpihaino an'i Zoom.Hatramin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa, nitombo ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fihaonambe video isan'andro avy amin'ny 10 tapitrisa ka hatramin'ny 300 tapitrisa ankehitriny.
Ireo mpifaninana lehibe Microsoft Teams sy Google Meet dia mihemotra, saingy mampitombo ny isan'ny mpampiasa mavitrika ihany koa izy ireo.Nitombo hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 75 tapitrisa ny mpihaino isan'andro amin'ny resaka video Microsoft mandritra ny volana.Tamin'ity volana ity, ny orinasa dia nandrakitra mpandray anjara videoconferencing 200 tapitrisa isan'andro.
Mitombo 3 tapitrisa isan'andro ny isan'ny mpandray anjara amin'ny antso an-tsary Google Meet ka mahatratra 100 tapitrisa. Efa nampiasain'ny olona 300 tapitrisa ny fampiharana fiaraha-miasa amin'ny Cisco Webex.Ary ny isan'ny fisoratana anarana isan'andro dia manakaiky ny 240.000. Saingy ny orinasa dia mbola tsy manome famantarana ny mpampiasa mavitrika isan'andro sy ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fivoriana video.
Google, Microsoft, Facebook dia mbola eo amin'ny andraikitry ny catch-up ary miezaka misarika mpampiasa vaovao amin'ny fahafahana maimaim-poana.Ohatra, Google vao haingana no nanao ny serivisy Meet ho maimaim-poana.